June 20, 2020 2574
आउन लागेको असार ७ गते दुर्लभ दिन हुँदैछ उक्त दिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो सूर्य ग्रह’ण लाग्दैछ । २०७७ साल असार ७ गते आइतबार’को सुर्य ग्रहण नै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा’ लामो हुनेछ । खण्डग्रास सुर्यग्रहण भनेर यस्को नामा’करण गरेको छ ।
बिहान १० बजेर ५३ मिनेटमा प्रा’रम्भ हुने यो ग्रहण १२ बजेर ४० मिनेट मध्य अवस्थामा आउँछ र २ बजेर २४ भन्दा पछाडीको समयमा यो सकिने छ यो ग्रहण’को अवधि ३ घण्टा ३१ मिनेटको’ हुनेछ ।
पक्कै पनि ग्रहण लाग्नु पृथ्वीवा’सीका लागि अनुकू’ल होइन । आकाशीय पिण्ड अर्थात् ग्रह–ताराहरुको नियमित प्रभाव पृथ्वीमा परिरहेको हुन्छ । सूर्यको प्रभावको त लेखाजो’खा नै नगरौँ । पृथ्वीमा रहने हरेक वनस्पति र प्राणीका लागि सूर्य जीवनदायिनी शक्ति हो । त्यसैले नियमित प्रक्रियामा आइरहेको सूर्यको प्रकाशमा ग्रहण लागे’पछि के होला ?
आइतबार इतिहास’कै दुर्लभ सूर्यग्र’हण लाग्ने भएको छ । यसलाई किन दु’र्लभ ग्रहण’ भनिएको हो त रुएक त सूर्यला’ई झन्डै ९० प्रतिशत ढाक्ने गरी लाग्ने ग्रहण, अर्को बार पनि रविवा’र अर्थात् सूर्यकै बार परेको छ । साथै ग्रहणका समय’मा दुई नक्षेत्र (मृगशिरा र आरद्रा) परेका छन् । यस्तो विरलै पर्ने हुँदा दुर्लभ भनिएको हो ।
यो विशेष किसिमको ग्रहण भएकाले कोरोना’ महामा रीले आ तंकि त बनाइरहेका बेला’ झनै अन्य प्राकृतिक वि पत् आउने हो कि भन्ने भन्ने भय एकातिर छ भने अर्कोतिर ग्रहण’पछि सबै कुरा मत्थर हुँदै जान्छ कि भन्ने झीनो आशा पनि पला’एको देखिन्छ ।
वैज्ञानिक दृष्टिमा ग्रहण लाग्नु खगो’लीय एक घटना हो तर यस बेला पृथ्वीमा नका’रात्मक विकिर’ण प्रवाह हुने कुरा वैज्ञानिकले पनि स्वीकारेका छन् । यस विकिर’णले मानवस्वास्थ्यमा न’राम्रो असर गर्छ । त्यसैले सोझै आँखाले ग्रहणतिर हेर्नुहुँदैन ।
आइतबा’रको सूर्यग्रहण बिहान १०.५० बजेदेखि दिउँसो २.२३ बजेसम्म रहन्छ । यस अवधिमा नि’दाउनुहुँदैन । यदि निदायो भने रोग लाग्छ भनिएको छ । त्यस्तै सकेसम्म दिसा–पिसाब गर्नुहुँदैन । खानपान गर्नुहुँदैन । स’म्भोग गर्न हुँदैन ।
गर्भिणीले घरबा’हिर निस्कनु झनै राम्रो मानिदैन । पूर्वीय संस्कृतिका यी मान्य’तामा वैज्ञानिकता छ । ग्रहण ला’गेको समयमा आउने’ विकिरणले न’कारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले हामीले सजग हुनु नै कल्याण हुन्छ ।
आइतबारको सूर्य ग्रहण कुन राशिलाई कस्तो ?
मेष : श्रीप्राप्ती, ​वृष : क्ष’ति, मिथुन : घा’त, कर्कट : व्यय, सिंह : लाभ, कन्या : सुखम्, तुला : मानना’श, वृश्चिक : क’ष्ट, धनु : स्त्रीपी’डा मकर : सौख्यम्, कु म्भ : चिन्ता, मीन व्य’था
Prevभोलि सूर्य ग्रहण लाग्दै, ग्रहणको समयमा यस्ता कार्य गर्दा हानी हुन सक्छ
Nextअसार ७ गते आईतबारको राशिफल हेर्नुहोस्…
आज डलरको भाउ बढ्यो की घट्यो ? यस्तो छ आजको विनिमय दर